Ny kinova vaovao an'ny LMDE 4 dia efa navotsotra ary ireo no fanovana | Avy amin'ny Linux
Ny fanombohana ny ny kinova hafa amin'ny fizarana Linux Mint izay tsy tokony handray ny Ubuntu ho fotony, fa i Debian kosa, ny kinova aseho dia "Linux Mint Debian Fanontana 4 " na fantatra amin'ny fanafohezana hoe "LMDE".
Ho fanampin'ny fampiasana ny tahiry fonosana Debian, ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny LMDE sy Linux Mint dia ny tsingerin'ny fanavaozana tsy tapaka avy amin'ny angon-drakitra fonosana (maodely fanavaozana ny familiana: Famotsorana ampahany, famoahana horonana), izay famoahana ireo fonosana dia navotsotra tsy tapaka ary ny mpampiasa dia afaka mifamadika amin'ny farany amin'ny fotoana rehetra.
Ho an'ireo izay tsy mahalala momba ny LMDE dia tokony ho fantany izaye ity fizarana Linux ity dia natao ho an'ireo mpampiasa mahay kokoa ara-teknika ary manome kinova fonosana vaovao. Ny tanjon'ny fampandrosoana LMDE dia ny manamarina fa ny Linux Mint dia afaka manohy misy amin'ny fomba mitovy, na dia ajanon'ny Ubuntu aza ny fivoarana.
Ankoatr'izay, LMDE manampy amin'ny fanamarinana ireo rindranasa novolavolain'ny tetikasa ho an'ny asanao feno amin'ny rafitra tsy Ubuntu.
Ny ankamaroan'ny fanatsarana Mint 19.3 kilasika dia tafiditra ao amin'ny fonosana LMDE, ao anatin'izany ny fampandrosoana ny tetikasa voalohany (manager vaovao, configurator, menus, interface, rindranasa GUI system). Ny fizarana dia mifanaraka tanteraka amin'ny Debian GNU / Linux, saingy tsy mifanaraka amin'ny Ubuntu sy ireo kinova Linux Mint.
1 Inona no vaovao ao amin'ny LMDE 4?
1.1 Sintomy ary apetraka ny LMDE 4
Inona no vaovao ao amin'ny LMDE 4?
Tamin'ny famoahana ity kinova vaovao ity, miavaka ny vaovao sasany (somary vitsy ihany) ary koa ny fanavaozana ireo fonosana mandrafitra ny rafitra.
Ny iray amin'ireo zava-baovao farany dia ny fanampiana ny fanohanana ny fizarazarana automatique partitions disk ho an'ny LVM ary amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny kapila iray manontolo, ny mpampiasa dia mahazo tombony amin'ny automatisation an'ity dingana ity mandritra ny fizotry ny fametrahana amin'ny alàlan'ny fisafidianana ity safidy ity.
Ho fanampin'izany dia voalaza fa hipoitra amin'ity kinova LMDE 4 ity ny encryption ny atin'ny lahatahiry trano dia tohanana, ary koa ny Fanohanana fiara NVMe ary ambonin'izany rehetra izany fanohanana ny boot voamarina ao amin'ny maody UEFI SecureBoot (izay manamora ny fametrahana amin'ny solosaina Windows).
Ny iray amin'ireo fanovana misongadina dia ny fanampiana ny fanohanana ny fametrahana automatique ny mpamily NVIDIA. Io dia ahafahan'ny mpampiasa karatra sary Nvidia manapa-kevitra raha toa ka tian'izy ireo hapetraka ny mpamily Nvidia tsy miankina na hametrahana mpamily nouveau maimaim-poana.
Momba ny ampahan'ny fampiharana ny rafitra dia voalaza fa Ny fanatsarana dia nafindra tao amin'ny Linux Mint kinova 19.3, izay misy fitaovana iray hamaritana ny solosaina HDT, ny fitaovana fanarenana boot hamerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra simba simba, ny tatitry ny rafitra, ny fitenim-piteny, ny fanohanana ny fanatsarana ny HiDPI, menio vaovao iray an'ny fanombohana, mpilalao horonan-tsary cellulloid, Gnote, sary, birao kanelina 4.4, sary famantarana status XApp, sns.
Ary farany, ny iray amin'ireo fanovana misongadina dia ny asa natao hanovana ho azy ny famahana ny efijery ho 1024 × 768 rehefa manomboka ny seho mivantana amin'ny Virtualbox.
Amin'ireo fanovana hafa miavaka amin'ity kinova LMDE 4 ity:
Fanohanana ny submodules Btrfs.
Fametrahana mandeha ho azy ny fonosana microcode.
Alefaso ny fametrahana default amin'ny fiankinan-doha aroso (sokajy voatondro).
Esory ny fonosana sy ny kitapom-bolan'ny deb-multimedia.
Databola fonosana Debian 10 miaraka amin'ny trano fitahirizana backports.
Sintomy ary apetraka ny LMDE 4
Raha te hanandrana an'ity kinova vaovao an'ny rafitra ity ianao hizaha toetra azy amin'ny milina virtoaly na apetrakao amin'ny solosainao aza afaka mandeha any amin'ny tranonkalany ofisialin'ny tetikasa ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny maka ny sarin'ity kinova vaovao ity, ny rohy dia ity.
Ny fizarana dia azo alaina amin'ny fametrahana sary ISO miaraka amin'ny tontolon'ny birao kanelina. Ny sary fizarana dia azo soratana miaraka amin'i Etcher amin'ny fitaovana USB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny kinova vaovao an'ny LMDE 4 dia efa navotsotra ary ireo no fanovana azy
Manuel Garcia dia hoy izy:
Nametraka LMDE4 aho rehefa avy nampiasa Linuxmint nandritra ny fotoana ela.
Hatramin'ny nametrahako an'i Mandrake (tamin'ny fotoana hafa izy ireo) dia tsy nahita rafitra hafa mora apetraka ary feno tanteraka aho taorian'ny nanombohana voalohany.
Tsy misy olana, fantatro ny mpanonta (nifandray tamin'ny USB nandritra ny fametrahana azy) nefa tsy nasiako mpamily. Ny fifandraisana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny wifi dia tsy maintsy miditra amin'ny teny miafina fotsiny. Tsy ilaina ny fidirana an-tsehatra amin'ny fanangonana tena ireo kapila ivelany izay ekena ho azy.
Nampiaiky volana ahy ihany koa ny olana nahazo ahy tamin'ny Linuxmint tamin'ny fanapahana an-tsokosoko ny wifi eto
Valiny tamin'i Manuel Garcia
Claudio Galaz Toledo dia hoy izy:
Fampidirana lehibe ho an'ny tontolo Debian.
Valiny tamin'i Claudio Galaz Toledo
Ny vidin'ny bitcoin dia manery ireo mpitrandraka hiala